Maal gashadayaasha guryaha waxay raadinayaan dib u soo kabasho Adeeg Maarayn Guryaha | RayHaber | raillynews
HomeGUUDMaalgashadayaasha guryaha kireeya ee raadinaya magdhow Adeegga Maareynta Guryaha
maalgashadayaasha guryaha guryaha raadinaya daryeelka adeegyada maaraynta hantida
Maal gashadeyaasha iibsada guryaha kirada ah ee kirada guryaha ayaa hadda ka daalay la tacaalista dhibaatooyin badan oo kireystayaasha ah. Maalgashadeyaashan, oo aan wakhti haysan, waxay xal u raadinayaan maareeyayaasha guryaha ee bixiya tiro yar oo ah adeegyada maaraynta mihnadlayaasha.
Tirada maal-gashadayaasha guryaha doonaya inay kasbadaan dakhliga kirada ayaa maalinba maalinta ka dambeysa sii kordhaya. Si kastaba ha noqotee, arrimo badan oo loo baahan yahay in lagu kharash gareeyo sida maaraynta wada xiriirka kireystayaasha, bixinta iyo dayactirka iyo dabagalka dayactirka ayaa cabsi gelinaya maalgashadayaasha guryaha ee doonaya inay abuuraan dakhli aan caadi aheyn. Xaaladaha kiraystaha saxda ah aan la dooran karin, inta badan maalgashadayaasha guryaha guryaha ah waxaa ku dhaca sababao la xiriira is afgaran waa xagga kireystaha sababa la xiriira bixinta kirada aan joogtada ahayn ee kirada. Kiisaska guryaha laga saarayo oo kordhay kirada oo aan la bixin ayaa waxay muujinayaan dhibaatooyinkaas ay kala kulmeen milkiileyaasha guryaha. Sababtaas awgeed, maal gashadeyaasha guryaha ayaa ka fogaaday inay sameeyaan maalgashi badan.
Ömer Kaplan, milkiilaha Kaplan Real Estate, oo muddo 15 sano ah ku jiray dhismaha iyo ganacsiga dhismaha ee gobolka Antalya, wuxuu sheegay in adeegga maaraynta hantida xirfadeed ee ay bilaabeen bilowgii sanadkan ay hadda shardi u tahay macaamiishooda. Kaplan wuxuu yiri, "Maadaama Antalya ay tahay magaalo dalxiis, waxaan iibinaa dhismeyaal badan oo guryaha ah dadka ka yimaada bannaanka magaalada. Si kastaba ha noqotee, maal-gashadeyaashayadu waxay filayaan inay naga caawiyaan iibka kadib iibinta, iyagu ma doonayaan inaan kireyno hantidooda qofna dhinacna uga baxaan. Maalgashadeyaasheena waxay ka baqi jireen inay maalgashi badan sameeyaan dhibaatooyinkooda awgood. Waxaan bilownay inaan siino khidmooyinka maaraynta hantida si xirfad leh si aan saameyn xun usameynin iibkeena. ”
Kordhinta heerarka kiraystaha sannadihii la soo dhaafay ayaa sidoo kale shaaca ka qaaday baahida loo qabo maaraynta hantida. Sida laga soo xigtay xogta TURKSTAT, 2002, 100 18,7 kiiba guri ayaa ahaa kireysteyaal, halka 2018 tiradan ay gaartay 28,5. Heerka kiraystaha ee Turkey ayaa sii waday in ay kor u aheyn in 15-kii sano ee la soo dhaafay. Xitaa hal sano oo ay kala maqnaayeen, tirada qoysaska kireystayaasha ah waxay kor u kacday 11 boqolkiiba illaa 6,7 milyan.
Xogtan ayaa muujineysa in inta badan maalgashadayaasha guryaha ee raba inay abuuraan dakhli aan toos ahayn oo kiro ah ay leeyihiin guryo badan. Si kastaba ha noqotee, milkiileyaasha guryaha ee aan daryeeli karin hantidooda isku waqti ayaa raadinaya daaweyn maamulka hantida si ay u ilaashadaan qiimaha maalgashigooda. Sidaas oo ay tahay, lataliyeyaal badan oo milkiileyaal ah oo doonayey inay u fududeeyaan ganacsiga maalgashadayaashoodu waxay bilaabeen inay bixiyaan adeegyo maareyn hanti si ay u bixiyaan adeeg ka wanaagsan.
Dhawaan khadka tooska ah ee internetka oo looga golleeyahay fududaynta maaraynta hantida ee maareeyayaasha guryaha waxaan Rentido.co aasaasaha Alper Ocaklı;
Iye ilaa iyo hadda, waaxda dhismaha guryaha waxay awood u siisay inay siiso adeegyo maareyn hanti oo ku saleysan xadidan. Waxaan hiigsaneynaa inaan u fududeyno adeegga maaraynta hantida annaga oo adeeggan u soo celinno bey'ada dijitaalka ah. Maareeyayaasha guryaha ayaa hadda aad ugu fududaan inay siiyaan maalgalintooda adeegyada maaraynta maalgashadayaasha leh guryo fara badan. Gaar ahaan, waxaa suurtagal ah milkiilayaasha guryaha inay helaan adeegyada maaraynta hantida guryahooda meelo kala duwan. Sababtoo ah gudaha Rentido, milkiilaha guryuhu wuxuu dooran karaa maamulaha guryaha ee u adeega uguna shaqeynta gobolkaas si uu ugu maareeyo gurigiisa meelo kala duwan wuxuuna raaci karaa nidaamka maaraynta hantida ee hantidiisa iyadoo loo maro hal khad. Markaa, qalabkeenu wuxuu fududeeyaa shaqada khubarada maareynta hantida iyadoo la xalinaayo dhibaatooyinka milkiilayaasha. ”
Adeegga maareynta hantida ayaa u muuqda inay labadaba daawo u yihiin dhibaatooyinka maal-gashadayaasha doonaya inay abuuraan dakhli aan caadi ahayn, iyo il dakhli joogto ah oo ay ka helaan aqoonyahanno badan oo ka shaqeeya waaxda guryaha.
Degmada Kestel oo raadinaysa maalgashi
Mashruuca Tareenka Sare ee Seddexaad Sapanca Qiimaha Guryaha
9 waxay u soo bandhigeysaa shirkadda 24 ee TCDD
Qiimaha hantida maguurtada ee Istanbul ayaa noqday saqaf
7 hantida maguurtada ah ee iibinta gobolka 11 by TCDD
IZBAN Guryaha Real Estate Moved in Torbalı
TCDD waxay soo saartaa hindise-bixiyeyaasha guryaha
Mashruuc ballaadhan ayaa kor u kacay sicirka guryaha
Taageerada Infrastructure ee qaybta hantida maguurtada
maaraynta hantida maguurtada ah
Adeegga Maareynta Hantida Maaliyadeed ee Maal-gashadayaasha
Ku laabo kirada
Adeegga maaraynta hantida